राजदूत नियुक्तिमा किन ढिलाई ? - Pahilo News
०१ भदौ २०७६, आइतबार
राजदूत नियुक्तिमा किन ढिलाई ?
काठमाडौैं, ४ वैशाख । पाँच देशमा राजदूत खाली भएको चार महिना बित्न लाग्दा समेत सरकारले अझै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएपछि एक दिन पनि राजदूत खाली नगर्ने कार्यविधि बनाएका थिए । खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघिबाट नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने र र एक दिन पनि खाली नराख्नेगरी नियुक्त गर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । तर, महिना दिनपहिले त टाढाको कुरा तीन महिना बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं, १ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प..
गोसाइँकुण्डमा एक लाख ३४ हजार भेटी संकलन, १० हजार भक्तजनद्वारा स्नान
रसुवा, १ भदौ । जनैपूर्णिमा पर्वअन्तर्गत गोसाइँकुण्डमा लागेको धार्मिक मेला भर्न आएका भक्तजनबाट चढाएको भेटी सार्..
पोखरा, १ भदौ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गाउँ परिषद् नगर्ने पालिकाको बजेट रोकि..
संघमा आउन ३३० निजामती कर्मचारीले बनाए जटिल बिरामी र कडा रोग लागेको सिफारिस
काठमाडौं, १ भदौ । एक वर्षमै ३३० जना निजामती कर्मचारीले आफूलाई जटिल बिरामी तथा कडा रोग लागेको मेडिकल बोर्डबाट स..
काठमाडौं, १ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज सम्बोधन गर्ने ..
रसुवा, १ भदौ । जनैपूर्णिमा पर्वअन्तर्गत गोसाइँकुण्डमा लागेको धार्मिक मेला भर्न आएका भक्..
पोखरा, १ भदौ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गाउँ परिषद् नग..
काठमाडौं, १ भदौ । एक वर्षमै ३३० जना निजामती कर्मचारीले आफूलाई जटिल बिरामी तथा कडा रोग ल..
मध्यपुरथिमि, ३२ साउन । मध्यपुरथिमिको बोडेमा मनाइने नीलबाराही नाच आज मध्यराति १२ बजेदेख..